Opel အန်းဒရွိုက်ကား DVD, Opel ကို Android 6.0 ကား DVD, တရုတ် Opel ကို Android 4.4 ကား Dvdsupplier
ဖေါ်ပြချက်:Opel အန်းဒရွိုက်ကား DVD,Opel ကို Android 4.4 ကား DVD,Opel ကို Android 4.4 ကား DVD,Opel ကို Android 5.1 ကား DVD,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Opel အန်းဒရွိုက်ကား DVD
Opel အန်းဒရွိုက်ကား DVD ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Opel အန်းဒရွိုက်ကား DVD, Opel ကို Android 4.4 ကား DVD ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Opel ကို Android 4.4 ကား DVD R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Insigina 2012 အတွက် Klyde dsp head unit  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Insigina 2009-2012 ကားတစ်စီး၏ DVD player ပခုံးထိမျက်နှာပြင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
MOKKA 2017 အတွက်မာတီမီဒီယာအသစ်ကိုထုတ်လုပ်ပါ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ASTRA ငွေကျပ် 2017 အတွက်2din ကားတစ်စီးအသံ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Astra J ကို 2014 အတွက်ကားတစ်စီးအသံဆက်စပ်ပစ္စည်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
VECTRA ANTARA ZAFIRA CORSA MERIVA ASTRA အတွက် Autoradio  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Insigina 2009-2012 များအတွက် ANdroid9 ကားတစ်စီးစတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Astra J ကို 2011-2014 များအတွက် Android9 ကားတစ်စီးစတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Astra J ကို 2015-2017 များအတွက် Android9 ကားတစ်စီးစတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Astra K သည် 2016-2017 များအတွက် Andorid9ကားတစ်စီးအညွှန်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
MOKKA 2017 ဘို့အရည်အသွေးမြင့်ကားကိုရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Astra J ကိုများအတွက် dash ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာစနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
corsa များအတွက်ဖက်ရှင်လမ်းကြောင်းသစ်ဟာ android 9.0 ကားတစ်စီး DVD  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လူကြိုက်များဟာ android 9.0 ကားတစ်စီးအသံ Astra K သည် 2016-2017  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
2019 Mokka 2017 ဘို့အရည်အသွေးမြင့်ကားတစ်စီးစတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
2009-2012 ဟာ android 9.0 ကားတစ်စီးအသံ Insigina  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Astra J ကို 2011-2012 ကားတစ်စီးအော်တိုမာလ်တီမီဒီယာ DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
dash ကားတစ်စီးစတီရီယို Astra J ကိုအတွက်ဖက်ရှင်လမ်းကြောင်းသစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Insigina 2012 အတွက် Klyde dsp head unit
Insigina 2009 - 2012 အတွက် dsp head unit ကျွန်ုပ်တို့၏ Insigina Android ကားဖျော်ဖြေရေးစနစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဘာရှိ သနည်း။ ၁။ ဤယူနစ် Insigina ကားသည် Android ဖျော်ဖြေရေးစနစ်ဖြင့် BT မှအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုခံစားနိုင်သည်။ ပထမ ဦး စွာသင်၏ iPhone...
ASTRA K 2016-2017 android 10 မော်တော်ယာဉ်လမ်းညွှန်စနစ် မြင့်မားသော IPS မျက်နှာပြင်ရှိ ဤယူနစ် ASTRA K မော်တော်ယာဉ်လမ်းညွှန်စနစ် ။ 1080P HD ဗွီဒီယို၊ subwoofer audio output နှင့်သီးခြားထိန်းချုပ်မှုတို့ကိုထောက်ပံ့သည်။...
CORSA 2015-2016 Android 10 မော်တော်ယာဉ် GPS စနစ်လမ်းညွှန် dash navigation အတွက် ဒီယူနစ် CORSA Android 10 ကို လက်ဖြင့်ဖုန်းခေါ်ခြင်းအတွက် External Microphone ထည့်သွင်းထားသည်။ audio streaming, ဖုန်းစာအုပ်, အမြန်ရှာဖွေအဆက်အသွယ် function ကိုထောကျပံ့။...
MOKKA 2017 android 10 ကားအသံလမ်းညွှန်စနစ် ဤယူနစ် MOKKA android 10 gps နှစ်ဆ din ဒင်းသည်နောက်ဆုံးပေါ် Android 10 operating system,4+ 64G memory, Octa-core CPU၊ အရည်အသွေးမြင့်စိတ်ကြိုက်ရေဒီယို RDS ပါရှိသည်။4* 50w...
Insigina 2009-2012 ကားတစ်စီး၏ DVD player ပခုံးထိမျက်နှာပြင်
Insigina 2009-2012 ကားတစ်စီး၏ DVD player ပခုံးထိမျက်နှာပြင် 1. Shenzhen Klyde Electronics Co, Ltd ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည် ၂။ Insigina 2009-2012 car dvd player touch screen ၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် : OS: Android 8.0 စနစ် TFT drive IC: Rockchip...
MOKKA 2017 အတွက်မာတီမီဒီယာအသစ်ကိုထုတ်လုပ်ပါ
MOKKA 2017 အတွက်မာတီမီဒီယာအသစ်ကိုထုတ်လုပ်ပါ MOKKA အတွက် Android 9.0 double din multimedia စတီယာရင်ဘီးထိန်းချုပ်မှုများနှင့်လိုက်ဖက်သည်။ လာမည့်သီချင်းသို့ကူးသွားပြီးအသံအတိုးအကျယ်ကိုပြောင်းပါသို့မဟုတ်အခြားချန်နယ်တစ်ခုသို့ပြောင်းပါ။ MOKKA အတွက် Double...
ASTRA ငွေကျပ် 2017 အတွက်2din ကားတစ်စီးအသံ
ASTRA ငွေကျပ် 2017 အတွက်2din ကားတစ်စီးအသံ အသစ် HD 1024X600 capacitive touch screen - သင်၏စမတ်ဖုန်းတွင်တွေ့ရသည့်အတူတူပင် touch screen သည်ယခင်ကထက်တုန့်ပြန်သည်။ ASTRA K အတွက်ဒီစိတ်ကြိုက် head unit သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရောင်းချတဲ့အရောင်းရဆုံးထုတ်ကုန်တစ်ခုပါ။...
Astra J ကို 2014 အတွက်ကားတစ်စီးအသံဆက်စပ်ပစ္စည်း
Astra J ကို 2014 အတွက်ကားတစ်စီးအသံဆက်စပ်ပစ္စည်း Astra J 2014 အတွက် Klyde ကား၏အသံဆက်စပ်ပစ္စည်းသည်နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 စနစ်ပေါ်တွင်အခြေခံထားခြင်းကြောင့်လျင်မြန်သောတုန့်ပြန်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်စွာလည်ပတ်မှုအတွေ့အကြုံကိုခံစားနိုင်သည်။...
VECTRA ANTARA ZAFIRA CORSA MERIVA ASTRA အတွက် Autoradio
VECTRA ANTARA ZAFIRA CORSA MERIVA ASTRA အတွက် Autoradio ဤသည်မှာ VECTRA ANTARA အထောက်အကူပြုဘာသာစကားများအတွက် Klyde Autoradio ဖြစ်ပြီးအမျိုးသားဘာသာစကား ၇၀ အထိရှိသည်။ 4GB RAM၊ Octa-Core နှင့် 32GB ROM ပါသောနောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 OS ။ VECTRA ANTARA...
Insigina 2009-2012 များအတွက် ANdroid9 ကားတစ်စီးစတီရီယို
Insigina 2009-2012 များအတွက် Android မှာ 9.0 ကားတစ်စီးအညွှန်း 1) ပလီကေးရှင်းကို run များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်အန်းဒရွိုက် 9.0 စနစ်, 4GB RAM ကို, Octa Core & 32GB ROM ကို၏ High-end Rockchip Processor...
Astra J ကို 2011-2014 များအတွက် Android9 ကားတစ်စီးစတီရီယို
Astra J ကို 2011-2014 များအတွက် Android မှာ 9.0 ကားတစ်စီးအညွှန်း နောက်ဆုံးပေါ်အန်းဒရွိုက် 9.0 ကိုသင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားစစ်ဆင်ရေးစနစ်တွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်။ A53 octa-core processor ကိုတုံ့ပြန်မှုအမြန်နှုန်း, အညွှန်း, ဂီတ, ဗီဒီယို, 100%...
Astra J ကို 2015-2017 များအတွက် Android9 ကားတစ်စီးစတီရီယို
Astra J ကို 2015-2017 များအတွက် Android မှာ 9.0 ကားတစ်စီးအညွှန်း 1) ပလီကေးရှင်းကို run များအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်အန်းဒရွိုက် 9.0 ပိုင်စနစ်, 4GB RAM ကို, Octa Core & 32GB ROM ကို၏ High-end Rockchip Processor...
Astra K သည် 2016-2017 များအတွက် Andorid9ကားတစ်စီးအညွှန်း
Astra K သည် 2016-2017 များအတွက် Android မှာ 9.0 ကားတစ်စီးအညွှန်း အများဆုံးတိကျမှုနှင့်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်လမ်းကြောင်းများရနိုင်သင်ဟာအလွယ်တကူထိုကဲ့သို့သော free.You များအတွက် Google မြေပုံ IGO, Sygic နှင့် Waze...
MOKKA 2017 ဘို့အရည်အသွေးမြင့်ကားကိုရေဒီယို
MOKKA 2017 ဘို့ကို Android 9.0 ကားတစ်စီးအညွှန်း 1.1024 * 600 HD ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်မျက်နှာပြင်။ ငါး-Point သို့ Touch ကို capacitive မျက်နှာပြင်။ MOKKA 2017 ဘို့ 2.car ရေဒီယိုပံ့ပိုးမှု *4မှတက်, 32GB မီဒီယာကဒ် / GPS စနစ်ကဒ် /2က USB Stick...
Astra J ကိုများအတွက် dash ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာစနစ်
Astra J ကိုများအတွက် dash ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာစနစ် 1. Configuration တစ်ဦး။ စင်ကြယ်သောက Android OS ကို 9.0, 1024 * 600 capacitive ဖန်သားပြင် ခ။ PX5 4GB RAM ကို, 32GB ROM ကို internal memory က c ။ built-in Wi-Fi Module & ပံ့ပိုးမှုကဘလူးတုသ် ဃ။...
corsa များအတွက်ဖက်ရှင်လမ်းကြောင်းသစ်ဟာ android 9.0 ကားတစ်စီး DVD
corsa များအတွက်ဖက်ရှင်လမ်းကြောင်းသစ်ဟာ android 9.0 ကားတစ်စီး DVD 1.3D Navigation: အဆိုပါကားတစ်စီးစတီရီယိုမြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှု၏ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကို real-time အညွှန်း function ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ လက်ရှိတည်နေရာ, အမြန်နှုန်းမိုင်အကွာအဝေး,...
လူကြိုက်များဟာ android 9.0 ကားတစ်စီးအသံ Astra K သည် 2016-2017
လူကြိုက်များဟာ android 9.0 ကားတစ်စီးအသံ Astra K သည် 2016-2017 1.Navigation အွန်လိုင်း, အော့ဖ်လိုင်းမြေပုံသုံးပြီးသို့မဟုတ်မြေပုံကဒ်ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်လွယ်ကူစွာအောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာလျင်မြန်စွာ Google Maps ကို, Waze အားစသည်တို့ကဲ့သို့အလုံးကိုအညွှန်း...
2019 Mokka 2017 ဘို့အရည်အသွေးမြင့်ကားတစ်စီးစတီရီယို
2019 Mokka 2017 ဘို့အရည်အသွေးမြင့်ကားတစ်စီးစတီရီယို 1.Hands-အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်အသံလွှ: သင့် Phone.You ချိတ်ဆက် driving.Stay ကြိုးမဲ့သင့်ရဲ့ iPhone နဲ့ချိတ်ဆက်ဒါမှမဟုတ် Android...
2009-2012 ဟာ android 9.0 ကားတစ်စီးအသံ Insigina
2009-2012 ဟာ android 9.0 ကားတစ်စီးအသံ Insigina သင့်ကားများအတွက်ကွက်တိ 1.Perfect ဤသည်ယူနစ် fit သင့်ကားနှင့်ဿုံလုပ်ကိုင်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒီဇိုင်းအနေဖြင့်အရာရာနဲ့ကြည့်ချုပ်ယင်းအကြွင်းမဲ့အာဏာအကောင်းဆုံးကြည့်ဖို့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။...
Astra J ကို 2011-2012 ကားတစ်စီးအော်တိုမာလ်တီမီဒီယာ DVD player
Astra J ကို 2011-2012 ကားတစ်စီးအော်တိုမာလ်တီမီဒီယာ DVD player 1, Carplay ကို USB Dongle: IOS ကိုနှင့် Astra J ကို 2011-2012 ကားတစ်စီးအော်တိုမာလ်တီမီဒီယာ DVD player ကို Android မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြင့်လိုက်ဖက်တဲ့, ဒီ Carplay ကို USB dongle plug...
dash ကားတစ်စီးစတီရီယို Astra J ကိုအတွက်ဖက်ရှင်လမ်းကြောင်းသစ်
dash ကားတစ်စီးစတီရီယို Astra J ကိုအတွက်ဖက်ရှင်လမ်းကြောင်းသစ် 1.LATEST ANDROID9OS ကို + Power ဟဒ်ဝဲ: A53 Octa Core 1.6 GHz အမြန်နှုန်း CPU ကို Mali400Mp2 GPU ကို In-Build နှင့်ဝိုင်ဖိုင်, Bluetooth, GPS module.Bring...
တရုတ်နိုင်ငံ Opel အန်းဒရွိုက်ကား DVD ပေးသွင်း
Opel များအတွက်ကစားသမား / ကားရေဒီယို DVD တစ်ချိန်ကတွေ့ရှိခဲ့အင်ဂျင်အိတ်ဇောနှင့် postprocessing system ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အပြေးစနစ်၏အခြေအနေ, ထုတ်လွှတ်မှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စေခြင်းငှါစံအခွအေနေကျော်လွန်လျက်ရှိသည် 1. ကားအသံ, ချက်ချင်းသတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ စနစ်ပျက်ကွက်သောအခါ, အမှားဆီမီးခွက် (MIL) သို့မဟုတ်အင်ဂျင်ကိုစစ်ဆေး (Engine ကို Check) သတိပေးအလင်းအိမ်နှင့် OBD စနစ်ကအမှားအချက်အလက်များကိုမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့လိမ့်မည်။ အဆိုပါရောဂါရှာဖွေတူရိယာများနှင့်ရောဂါရှာဖွေစံ interface တွင်အမှားကုဒ်ပုံစံကိုမှသက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ဖတ်နိုင်သည်။ အမှား codes တွေကိုများ၏အရိပ်အယောင်အဆိုအရပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပုဂ္ဂိုလ်များလျင်မြန်စွာနှင့်တိကျစွာအမှား၏သဘောသဘာဝနှင့်တည်နေရာကိုဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ပါတယ်။
ဗွီဒီယိုပြန်ကျော့ထဲမှာ, cursor ဆွဲယူနိုင်အောင် Opel quad core processor ကိုစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက် Navi ကားတစ်စီး၏ 2.The မြန်နှုန်းအလွန်စံပြဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ နှင့် Opel ကားကို mp4, များအတွက်မူရင်းကားတစ်စီး interface ကို UBS နှင့် aux နှင့်သဟဇာတ။ မော်ဒယ်: Opel CORSA 2015 / VECTRA (2005-2008) / ANTARA (2006-2011) / ZAFIRA (2005-2011) / CORSA (2006-2011) / MERIVA (2006-2011) / Astra (2004-2009 များအတွက်ကားအသံကစားသမား ) / MOCCA 2012-2015 / INSIGINA 2014-2015 / Astra J2011-2012
Opel အန်းဒရွိုက်ကား DVD Opel ကို Android 4.4 ကား DVD Opel ကို Android 5.1 ကား DVD